पियारीलाई परदेशीको प्रेमपत्र | चितवन पोष्ट दैनिक
पियारीलाई परदेशीको प्रेमपत्र
२०७० आश्विन १८, शुक्रबार ०५:०९ गते
चोखो माया, अविरल सम्झना ।
म सकुशल छु र आशा छ, तिमीलगायत सबैलाई पनि कुशल मङ्गलै होला । यसपटक पनि दसैँमा घर आउन सकिएन । परदेशको जागिर आफूले चाहेजस्तो र भनेजस्तो कहाँ हुन्छ र ! जे होस्, मेरो भौतिक शरीर त्यहाँ उपस्थित हुन नसके पनि मेरो मन भने त्यहीँ नै छ । जति मन कटक्क खाए पनि र मनमा जतिसुकै डढेलो लागे पनि यहाँ नक्कली हाँसो हाँसेर औपचारिकता निभाइरहेको छु । नेपालीहरुको ठूलो चाड दसैँको उमङ्ग गाउँभरि फैलिसकेको होला । विश्वभरि छरिएर रहेका लाहुरेहरु रमाइरमाइ घर फर्किरहेका होलान् । सहरबजार झिलिमिली भैसक्यो होला । तर यहाँ के दसैँ, के तिहार, के चाड, के पर्व ! सधैँ उस्तै उराठ र बेचैन मात्र छ । मेरी डियरलाई लाग्दो हो, मेरो कालेले विदेशमा सधैँ मोज र भोज गरिरहेको होला । हरिया–हरिया नोट सुटकेसभरि थोपरेको होला । सुन्दरीहरुसँग रोमान्स गरिरहेको होला । सत्य कुरा भन्दा मन भक्कानिएर आउँछ, माई हनी ! तिमी कति कुरा त विश्वासै गर्दिनौ र कति कुरा बुझ्दै बुझ्दिनौ । मेरो कति आत्मकथाहरु नलेखिएरै हराए, कति कविताहरु आँसुसँगै बगे । कति आशाहरु ओइलाए, कति सपनाहरु बिथोलिए, कति भावनाहरु चोइटिए र कति व्यथाहरु दोहोरिए, भनिसाध्ये छैन अनि पीडाका दिनहरु गनिसाध्ये छैन । माइ हार्ट ! तिमीसँग सँगै बस्न समयले दिएन, परिस्थितिले जुराएन । तर चिन्ता नमान, मेरो तन र मन तिम्रै लागि हो । तिमीसँग बिदाइ भएर आउँदा म जस्तो थिएँ, अहिले पनि त्यस्तै नै छु ।
जति दुःख गरे पनि पैसाले कहिल्यै पुगेन । डार्लिङ र छोराछोरीकै लागि भनेर त मैले नित्य १८ घन्टासम्म काम गरिरहेको छु । अस्ति भर्खरको पत्रमा तिमीले उल्लेख गरेकी रहिछौ, हामीलाई बिर्सनु’भो, वास्ता गर्नुहुन्न, फोन पनि कम गर्नुहुन्छ जस्ता गुनासोले मेरो मनै भरङ्ग भएर आयो । दुई–चार पैसा बचाउन सके तिमीहरुलाई नै राम्रो होला भनेर नै मैले फोनमा फजुल खर्च कम गरेको हुँ । दैनिक फोनमा घन्टौँ गफ गर्न त कसलाई मन थिएन र काली ? कुरा बुझ्दाबुझ्दै पनि अबुझ हुनुहुन्न । तिम्रो फर्माइस पनि मैले सकभर पूरा गरिरहेकै जस्तो लाग्छ । तीन महिनाअघि छोराछोरीका लागि दुई थान आइफोन पठाइदिएकै हो । त्यसको ऋण तिर्न मैले अझै चार महिना दुःख गर्नुपर्छ भन्ने तिमीलाई थाहा छैन होला । टिनएजरहरु हुन्, उनीहरुको पनि सोख होला, विदेश गएको बाबुबाट आशा गर्नु पनि स्वाभाविकै हो । म यहाँ त्यही सेकेन्ड ह्यान्डको नोकिया–११०० मोडलको मोबाइलले काम चलाइरहेकै छु । यहाँ ल्याएका सामानमा मैले केही पनि थपेको छैन । चार महिनाअघि मात्र माइकल घर आउँदा चालीस इन्चको एलइडी टिभी पठाइदिएकै हुँ । होम थिएटर, माइक्रो ओभन, फ्रिज र कम्प्युटर किनिभ्याएकै छौँ । अहिले त घर पनि ‘हाइभिजन हल’जस्तै भएको होला । तर, देखावटी ‘स्ट्यान्डर्ड मेन्टन’ गर्दा व्ययभार थपिएको कुरा स्नातक पास गरेकी तिमीलाई थाहै होला । तीजमा सुनको चन्द्रमा बनाउने तिम्रो चाहना पनि पूरा भएकै हो । डलरमा तलब थाप्ने श्रीमान्का श्रीमतीले जसरी नै तिमीले डिमान्डको थुप्रो लगाएर मलाई परदेशकै जिन्दगी बिताउन बाध्य नबनाऊ प्रिय ।
दसैँ खर्च पुगेन भनेर भनेको सुन्दा मलाई त रिँगटा नै लागेर आयो । अझ समूहबाट ऋण लिएर एउटा हार लगाउने तिम्रो चाहना सुनेर त म अवाक् भएँ । दसैँ अफरमा एउटा बाइक किस्तामा किन्ने छोराको रहर सुनेर म त बेहोस मात्र हुन सकिनँ । सधैँलाई पुग्ने र चल्न सक्ने खर्च गरे भोलिका लागि समस्या पर्दैन डार्लिङ । म अरु के पो भन्न सक्छु र खै ! ऋण बढाएर ठूलो मान्छे भइँदैन । देखावटी शानले मात्र समाजमा मान पाइँदैन । मोडर्न जीवनशैलीमा जीवन बिताउन पाउनु त खुसीकै कुरा हो । तर के गर्नु, तिमीहरुको इच्छाअनुसार म चल्न नसकेकोमा क्षमाप्रार्थी छु । म घर नआएको पनि तीन वर्ष हुन लागेछ । कमाउने र बचाउनेले यही अवधिमा घरसमेत ठड्याइसके । कसैले राजधानीमा जग्गा जोडी भ्याए । तर, हामीले यो जुनीमा घर त के पुरानै घरमा पेन्टिङ पनि लगाउन सक्ने सामथ्र्य राख्न सक्दैनौँ । प्रभुको लीला पनि अपरम्पार छ प्रिय ! तिमीहरुको थप चाहना पूरा गर्न पाएदेखि अरु ६ घन्टा ओटी गर्ने मेरो चाहना छ ।
डार्लिङ, हर्लक्क बढेको छोरो पढाइतिर भन्दा घुमाइतिर बल गर्न थालेको छ रे ! अहिलेको जमानामा लभ नगर्ने र नपर्ने को छ र ? तैपनि, प्लस टुको कलिलै उमेरमा प्रेम गरेर समय बर्बाद नगरे राम्रो हुनेथियो । अहिले जमाना पनि साह्रै डरलाग्दो छ, गाली पटक्कै गर्नुहुन्न । मुनामदनको भन्दा गहिरो माया–पिरती भएकाहरुले कतिखेर जीवन बर्बाद बनाउँछन्, थाहा हुन्न । उनीहरुलाई दबाब होइन, निगरानी बढाउनू । चुरोट त फेसनजस्तै बनिसक्यो प्रिया, गाँजा–चरेस र ब्राउन खानबाट बचाउनू । डान्स पार्टी, बर्थ डे, होली डे, गेट टु ग्यादरिङ, फेयरवेलजस्ता प्रोग्राम सामान्य हुन् । बढी पैसा नदिनू र समयमै घर आउन भन्नू । के गर्ने, तिमीसँग लभ गर्ने बेला कोदोबारी, फापरबारी र गोठालो जाँदाको जस्तो जमाना अहिले छैन । पहिले त टन्न भुटेको मकै र भटमास खाएर डेटिङ गइन्थ्यो । तिमीलाई सम्झना छ कि छैन कुन्नि, कोदोको रोटी बाँडेर हामीले पिरती लगाएका थियौँ । अहिले त कोदोको न त रोटी पाक्छ, न त ढिँडो । पाएसम्म तीनपानेमै प्रयोग हुन्छ । दसैँमा घरमै बसेर खा बाबु भनेर एक कार्टुन बियर, एक फुल भोड्का, एक फुल जीन र एक फुल ह्वीस्की ल्याएर दिनू । कक्टेल्स बनाएर खाने चलन बढ्दो छ । तिमीले पनि एक–दुई पेग खाँदा हुन्छ । मोडर्न जमानामा पनि के निस्तो मासु खाने ?
खसी महँगियो, कुखुरा बजारमा सर्टेज भो भनेर माछा खाने होइन नि ? काँडा अड्किन सक्छ । बरू, त्यो पल्लो घरमा पालेको बँदेल बेच्छ भने त्यही किनेर ल्याए पनि हुन्छ । यसै खर्च, उसै खर्च ! अँ, यसपालि साला र सालीले पनि दसैँमा भिनाजुलाई सम्झेका रहेछन् । हिजै हो, स्काईपमा कुरा गर्दा भिनाजु आश गरेर भनेको चाहिँ होइन, यो दसैँमा स्क्रिन टच… भनेर झड्का दिएका छन्, सम्भव भएसम्म तिहारमा पठाइदिऊँला । यहाँ केटाहरुसँग लिएको ऋण तिर्न गाह्रो परिरहेको छ । अरु धेरैले अपेक्षा गरिरहेका होलान् । कालेले पठाइदिएको भनेर त्यतै अलि राम्रो जातको चकलेट किनेर मुख मीठा पारिदिनू । अरु के भनौँ र माया, जति कुरा गरे पनि सकिँदैन । देशभर चुनावको रन्को छ रे, मैले सुनेको तिमीले पनि महिला कोटाबाट उम्मेदवारको टिकट पायौ रे । पञ्चेबाजा बजाएर उम्मेदवारी दर्ता गराएको सुनेर मेरो मनमा अलिकति राहत भयो । हेर, मुसुक्क हाँसेर हुन्छ कि रेखा थापाले झैँ नाचेर हुन्छ, यसपालिको चुनाव जित्नुपर्छ । तिमी सभासद् भएपछि मलाई राम्रो देशमा जाने अफर आउन सक्छ । तिम्रो पनि सभासद्को जागिर भएपछि परिवारको खर्च धान्न पनि सहज हुन्छ कि ? चुनाव सरेन र निर्धारित मितिमै हुने भयो भने म १५ दिनको छुट्टी मिलाएर भए पनि तिम्रो प्रचार गर्न आइपुग्ने छु ।
हेर, चान्समा डान्स गर्न सक्नुपर्छ । यो पार्टी र उ पार्टी भनेर बस्यो भने कहिल्यै प्रगति हुँदैन । जताबाट झर्छ, त्यतै लाग्ने हो । त्यत्रो संगठित सदस्य, केन्द्रीय सदस्य, मन्त्री भइसकेकाहरु त धमाधम टीका थाप्दै टिकट माग्दै गर्दा लाज भएन भने हामीलाई केको लाज ? तिमीले गाली गर्छ कि भनेर पार्टी परिवर्तन गरेको कुरा ढाँटेकी रहिछ्यौ, मलाई रोनाल्डोले भाइवरबाट सम्पर्क गरेर भन्दै थियो । अनि तिम्रो फेसबुक वालमा पनि बधाईको ओइरो र अहिलेदेखि नै प्रचारप्रसार भएको देख्दा तिमी सभासद् हुन्छ्यौ भन्नेमा म शतप्रतिशत विश्वस्त छु । अनि मैले त्यो डेविडेका साथीहरुसँग भनेर १०÷१२ वटा बुलेट बाइकको प्रबन्ध गरिदिन्छु । भटट्ट बुलेटको ताँती देखेपछि भोट त पक्का खस्छ । त्यसपछि त छँदैछ नि, को यो मलेसियामा आएर दुःख गरोस्, डलरवाला देशमा गइन्छ नि ! डार्लिङ, बेस्ट अफ लक । तिमी उम्मेदवार भएकोमा गर्वले मेरो छाती फुलेर ३२ इन्चको भएको छ । मेरा तीतामीठा कुराहरु यहीँ अन्त्य गर्दछु । खर्चको कत्ति चिन्ता नगर्नू । बाँकी अर्को पत्रमा भेटौँला, हुन्न र उम्मेदवार श्रीमतीज्यू ?